Shiinaha Mashiinka seddex-waji asynchronous ee warshad wax shiida iyo goynta iyo alaableyda | Leadrive
Taxane YXP heerkulka sare dabka la dagaallanka dabka fa ...
Taxane YEJ2 jejebiyey electromagnetic saddex waji asynch ...
Mashiinka asynchronous saddex-waji ah oo loogu talagalay dhagax shiidi ...
Taxane IE3 oolnimada-sare heer sare saddex waji asynchr ...
Taxane sare IE2 oolnimada saddex-waji asynchronous ...
Mashiinka asynchronous ee saddexda waji leh ee loogu talagalay dhagax shiida iyo goynta
Sifooyinka mootada isku-darka ah ee asynchronous-ka ah ee dhagax dhigista iyo goynta: jir yar, awood sare, waxqabadka xiritaanka wanaagsan, heerka ilaalinta sare, gariirka mootada oo hooseysa, buuqa hoose, xoog iyo dhaqdhaqaaq la'aan,
Hawl yar, iwm
Saddex-waji matoorrada asynchronous ee dhagax-dhigga iyo goynta waa taxane qolof bir ah
Me Qaab No.: 71-132
Way Wadada Shaqada: S1
Class Fasalka daboolka: F
Level Heerka Ilaalinta: IP56
Shabakada iibka ee Lijiu Motor waxay ku fiday in ka badan 20 gobol iyo magaalooyin ay ka mid yihiin Woqooyi-bari, Woqooyi-galbeed, Waqooyiga, Bartamaha, Koonfurta, Koonfur-galbeed iyo Bariga Shiinaha. Badeecadaha waxaa loo dhoofiyaa Yurub, Ameerika, Koonfur-bari Aasiya iyo dalal iyo gobollo kale.
Lijiu Motor wuxuu ku takhasusay soosaarka, R&D iyo iibinta matoorro kala duwan. Badeecadaha waxaa ka mid ah YE2, YE3, YB3, matoorrada munaaradda qaboojinta, YD2, YEJ2, YVF2, YC / MC, YL iyo taxane kale oo badan oo saddex-waji matoorro asynchronous ah iyo matoorro kale oo gaar ah oo gaar ah. Wax soo saarku wuxuu qaadanayaa naqshadeynta heerka qaran ee midaysan, iyo heerka awoodda iyo cabbirka rakibaadda oo u hoggaansamaya heerka IEC ee Komishanka Caalamiga ah ee Electrotechnical Commission. Waxay leedahay faa'iidooyinka waxtarka sare iyo keydinta tamarta, Xuddunta bilowga ah, qeylada hoose, gariirka yar iyo kalsoonida sare. Badeecada ayaa ka gudubtay shahaadada CE ee Midowga Yurub iyo shahaadada Shiinaha ee CCC iyo shahaadada CQC. Shirkaddu waxay heshay shahaadada nidaamka tayada caalamiga ah ee ISO9001. Lijiu Motor waxaa ka go'an inay bixiso xalka ugu fiican ee loogu talagalay dadka isticmaala warshadaha iyo korontada, iyadoo loo habeeyay matoorro gaar ah.
Hal-abuurnimo iyo hufnaan ayaa mabda 'ii ah, la qabsiga iyo dabacsanaanta ayaa ah faa'iidooyinkeenna. Waxaan higsaneynaa inaan noqono wakiilka "Lagu Sameeyay Shiinaha" qeybta gawaarida. Shirkaddu waxay u hoggaansan tahay falsafadda ganacsiga ee ah "in si daacad ah loola dhaqmo laguna guuleysto tayo". Si loo daboolo baahiyaha ganacsatada gudaha iyo shisheeyaha, waxaan ku dadaalnaa inaan dhisno sumadda "Lijiu" oo aan "Lijiu" caan ka noqonno dalka oo dhan iyo adduunka oo dhan. U adeegso daacadnimadeena iyo xikmaddeenna sidii aad u abuuri lahayd berrito wanaagsan oo gacanta kula jirta!
Hore: Mashiinka asynchronous ee saddex-waji ah ee bamka dhuumaha
Xiga: Mashiinka asynchronous saddex-waji biyo-qaboojiyey
Taxane YEJ2 jejebiyey electromagnetic saddex waji a ...
Mashiinka asynchronous ee saddex-waji ah ee bamka dhuumaha
IE1 taxane saddex waji ah asynchronous motor
YVP taxane saddex waji matoorro asynchronous for ...